Semalt: 5 Mkpa Atụmatụ Na Otu esi eguzogide Phishing Scams na Spam
A na-eziga ihe dị ka ijeri ijeri isii nke email spam kwa ụbọchị n'ụwa niile. A na-eme atụmatụ na pasent 20 nke ozi ịntanetị nke ezitere gị bụ spam. Na North America, enwere ike ichoputa isi nke 80% nke spam ebe a maara ha na ha sitere na 200 spammers a ma ama. Spam bụ nchegbu n'ihi na ọ bụ ihe ndabere nke a pụrụ ịmalite ịmepụta phishing - clases de fotografia digital online gratis. Ihe ize ndụ Phishing ị na-azụ akaụntụ na njirimara gị mgbe spam na-abụkarị iwe.
Oliver King, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ọrụ nke Ọkachamara , na-akọwapụta ihe ndị na-esonụ site na nke ị nwere ike chebe onwe gị pụọ na spam.
Mepee ọtụtụ adreesị email.
Mbụ, debe adreesị ozi-e nke onwe gị ma gbochie ya iji ederede onwe gị na otu ezinụlọ na ndị enyi ole na ole. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị spammers na-edepụta aha email site na ijiko aha, nọmba, na okwu. Dika ị ga-achọ iji aha nna gị na aha mbụ gị na adreesị ozi-e gị, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịmepụta ihe ma họrọ nchịkọta ihe odide pụrụ iche. N'ụzọ bụ isi, ịchọrọ ime ka o siere mmadụ ike inweta adreesị email gị. Ugbu a, mepee adreesị ozi-e nke ọha na eze ma jiri ya na ọnọdụ ndị chọrọ ka ị denye aha na ọrụ ntanetị ma ọ bụ debanye aha maka otu nnọkọ. Gbalịa iji usoro adreesị ozi-e nke ọha mmadụ mee ihe ndị a. Gbanwe ya ugboro ugboro. Jiri ọtụtụ adreesị ozi-e..Ihe abụọ a ga-enyere gị aka ịma onye na-enye gị adreesị email gị gaa na ndị spammers. Mgbe ị na-achọ saịtị ma ọ bụ n'elu ikpo okwu na-ere adreesị email gị, a dụrụ gị ọdụ izere ha ma kọọrọ Google.
Akwụsịla ịzaghachi ọ bụla.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị spammer nyochaa nzaghachi ndekọ na ntinye aka na adreesị ozi-e spam ya na ebumnuche nke ịchọpụta arụmọrụ ahụ. Nke a na-egosi na ka ị na-azaghachi ozi ịntanetị a, ohere kachasị elu bụ na ọnụ ọgụgụ nke spam ga-abawanye.
Chee echiche tupu ị kpebie ịhapụ aha.
A chọpụtala na ndị spammers na-eziga ozi ịntanetị na-ezipụghị adịgboroja nke na-ewepu aha njikọ. Usoro ndị ahụ na-arụ ọrụ na ihu ọma ha site n'ịhụ na ozugbo ị pịa "wepu aha" ọnụọgụ spam ị na-enweta na-abawanye. Ọ bụrụ na emelitere site na amaghi ama ma mee ka ị wepu aha gị, a dụrụ gị ọdụ iguzogide ọchịchọ ahụ.
Gbaa mbọ hụ na ihe nchọgharị gị dị ugbu a.
Ndị Mmepe Nchọgharị na-emelite ngwa ndị a iji hụ na ihe niile nchebe dị ugbu a dị. Enweghị ike imelite ihe nchọgharị gị na-ekpughe kọmputa gị na malware ma ọ bụ chinchi nwere ike ịnakọta ozi gbasara gị ma ziga ya na spammers. A gwara gị ka ị hụ na bọtịnụ mmelite gị na-aga n'ihu iji chebe data gị.
Gbanye na nzacha spam.
Gbaa mbọ hụ na onye na-eweta akaụntụ email gị nwere ọtụtụ atụmatụ spam. Gmail sitere na Google nwere ebe nchekwa spam ebe ọ na-echekwa email na-akpaghị aka na ọ na-akọwa na ọ bụ spam site n'ịbanye na igbe mbata gị. Nke a na-eme ka belata iwe iwe nke spam karịsịa mgbe ha na-ahụ ụzọ ha na igbe mbata mbụ.